Milkiilayaasha Guryaha Waa In Ay ka Digdoonaadaan Qofka Ay Kakireenayaan Guryahooda – STAR FM SOMALIA
Wasaarada Amniga Dowladda Federaalka Somalia, ayaa waxa ay digniin u dirtay dadka iska leh guryaha ku yaallo Magaalada Muqdisho, waxaana Dowladda ay kaga digtay dadkaasi inay ka kireeyaan dad aanan aqoon loo laheyn.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Gudaha Maxamed Yuusuf Cismaan, ayaa sheegay gurigii laga kireeyo dad aanan la aqoon oo qarax lagu fuliyo Dowladda Somalia ay la wareegayso.
Wuxuu sheegay Milkiilayaasha guryaha iska leh in looga fadhiyo inay dadka kireesanaya guriga ka diiwaangeliyaan Saldhiga ugu dhaw ee Booliska Degmada si Booliska ay ula socdaan dhaq-dhaqaaqa dadkaasi.
“Milkiilaha guriga iska leh marka uu doonayo inuu qof ka kireeyo gurigiisa waa inuu tagaa xarunta Degmada, oo ay la socdaan masuuliyiinta Degmada iyo saldhigga ciidankuba.” Ayuu yiri Maxamed Yuusuf.
Sidoo kale Afhayeenka Wasaarada Amniga Gudaha Maxamed Yuusuf Cismaan, ayaa tilmaamay si shuruud la’aan ah Dowladda Somalia inay ula wareegi doonto gurigii lagu qabto qarax.
“Nidaamkaas adigoo maray haddii gurigaaga uu wax ku sameeyo qofkii kireystay, laguuma haysto, laakin haddii aad qariso oo aadna soo ogeysiin degmada, misna qarax laga fuliyo ama laga helo, waa lala wareegayaa guriga.” Ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Shalay ayeey aheyd markii ciidamada Booliska Somalia howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen guri ku yaallo Degmada Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho lagu soo qabtay hub iyo waxyaabaha qarxa, sidoo kale saddex ruux oo mid ka mid ah ay tahay haweenay ayeey Booliska soo qabteen.